5 sababood awgood Dib u qaabeyn midab buluug ah ku jiro ayuu calanka Somaliland ku banaan yahay !!.Dr.khadar-Libaaxley. | Baligubadlemedia.com
Calan sababta uu u jiro ayaa ah in uu yahay astaanta sumada dal xuduudo la layaan leh iyo dadkiisa uu ka dul babanayo hadh iyo habeen walba; isweyn ku qotonta calanka ayaa ah , maxay tahay sirta ku jirta waxa uu ka koobanyahay calanka iyo xidigta madaw calanka somaliland u taaganyahay ?!
Sida aad wada ogtihiin bulshow calankeenu waxa uu ka koobanyahay ( 4 midab cagaar, cadaan, casaan iyo madow oo ah marka lagu daro midabka xidigta madow ee badhtanka calanka yuurarta + shahaada tawxiidka oo ah astaanta islaamka).
Wax aan filayaa Saddexda midab ee cagaarka, cadaanka iyo casaanka ee xudunta u ah curiyayaasha uu ka koobanyahay calanka jamhuuriyada Somaliland yagleel ahaan in uu ka asal qab ( calanka jamhuuriyada irland- UK) oo qayb ka aheyd ( British protectorate of Somaliland ) waayo calanka saddexdan midab waxa leh wadamo badan oo ingiriis gumeystay iyo waliba ingiriis laftiisa sida 🙁 Ireland , india iyo jasiirada Socotra ee yemen ).
Calan marka dal iyo dad jiraa sameysanayaan waxa ay ku saleeyaan yagleeshiisa ( dhankooda, diintooda iyo wixii ay uga maarmi waayaan astaanta jiritaankooda) Dunida waxa ay ka koobantahay 197 marka lagu daro Somaliland; 65 dal oo ka mid ah 197 kaa ayaa astaan diimeed kuleh calamadooda; ( muslim symbol flags countries 33% ) ( Christian symbol flags countries 48%) .
Mudane akhrista Aan dulucda ku soo dhawaano iyo faaqidida xidigta madaw ee dhex yuurarta calanka jamuuriyada Somaliland !!.
1. Reer somalilandow maxay u taagantahay xidigta madaw ee calanka badhtanka u taal ?
2. Miyey dunida jirtaa xidig madaw ?! miyeyse sifaha xidigaha tahay madow?
3 .Hadiiba macnaha xidigta madow yahay midnimo somaliweyn oo dambe ma jirto; miyaaney dhanka kale u muuqanin (astaan HABAAR ) nuurka iyo illayska dawladnimo ama nuurka ALLE 5ta soomaaliyeed intaba laga dami !! hadii ay sidaa tahay ma la odhan karaa qayb weyn ayey ka tahay ictiraafka fool adkaaday .
4. Ma shan dal oo wallaalo mad-madow ah baa?! Haday sidaa tahay ,5 tan ba dalal badan oo African ah ayaa ka madow badan, waliba miyaaney bani-hashim ka somalidu wada sheegato ?!!.
Soojeedin iyo sababaha qiimaha midabka buluuga ah:
Qof ahaan waxa aan soo jeedinayaa in calanka Somaliland dib u qaabeyn lagu sameeyo; gaar ahaan ( lagu daro qayb midab buluug ah iyo xidigta hada madow oo dib loo caddeey oo laga dhigo xidig cad sababahan dartood).
1. Midabka buluuga ah ama blue-light ka ah sirta dhabta ah ee dahsoon ee ku jirtaayi waa ( astaanta jiritaanka caalamka tawxiid dabadii) waa midab safka hore kaga jira midabada ( ALLE ee 7 ah ) dunida oo kaliya marka laga yimaado waa calanka astaanta guud u ah caalamka oo dhan ( cir iyo dhul intaba) mudane akhriste kor eeg cirka oo dhami waxa uu huwanyahay calanka astaanta buluuga ah , bal u fiirso dhulka oo dhan calanka uu huwanyahay waa buluug waayo arladu 71% waa biyo waliba biyo badeed , Baduhu astaanta calanka ay sitaan waa buluug ,sidaa darteed midabka qiimahaa leh waa mahuraan in uu calankeena qayb ka noqdaa.
2. Midabka buluuga wuxu sir iyo astaan u yahay ( xukunka, tallada, boqornimada, mulkiga runta , xaqiiqada iyo nabadgalyada) fahamka sirta ku jirta midabka buluuga ah waata garansiisay in ay qaybaha calankooda ku daraan wadamada maanta dunida hogaamiya sida ( great Britain, USA, Israel , france,Rassia , Australia midowga yurub, qaramada midoobay , Djabuuti, ethoipia iyo dhamaan reer yurub marka wadan-wadan kaliya laga yimaado; horey baa loo yidhi ( wuxu qayrkaa qabo ayuu qosol kaana ku dhan yahay); sirtaa awgeed waa sababta madaxda wadamada dunida inteeda badan ay labis ahaan u xidhaan ( suudh ama xadhiga loo xidho suudhka oo midab buluug ah leh ) marka ay doorashooyinka ku guuleystaan xiliga khud-bada u horeysa, xilliga xaflada xil-wareejinta iyo marar badan oo kale intaba!!; sidaa darteed waa ma huraan calanka qiimahaas leh in uu qaybka noqdaa calanka reer Somaliland.
3. Somaliland dhaqan diimeed ahaan maqaamada qaadiriyada waxa aan maqaam kasta ku arki jiray ( 4 calan oo kala ahaa cagaar,casaan,buluug iyo cadaan oo ay khusuusiyan u kala lahaayeen shuyuukhda reer Somaliland intooda badan ku abtirsadaan; midabka cagaar-sh.ixaaq , midabka casaanka ah sh.ciise, midabka buluuga ah sh.Samaroon) dhankaa marka laga eego calanka Somaliland waxa ka maqan qaybtii buluuga aheyd ee calankii sh. Samaroon oo ay tahay in xukuumadu ku darto. Dhanka hartiga waxa aan filayaa sh.ismaciil jabarti calankiisu qaybta ku afarta ah ee cadaanka ah; sidaa darteed waa muhiim iyo mahuraan in uu qayb ka noqdaa midabka noocaas ah calankeena.
4. Mufasiriinta diimaha ayaa sheega ( markii nabi muuse illaahay ku yidhi: illaahow waxa aan rabaa in aan ku arko !! ee illaahay ku yidhi : ima arki kartide waxa aan istusinayaa buurtaa! Ee hadii ay ku sugnaato halkeeda waad arki ; mufasiriintu waxa ay sheegaan munaasibadaasi si ay u dhacdo in nabi muuse iyo 70 nin ee la socday shardi lagaga dhigay in dharka ay soo xidhanayaan ama koofiyadahooda madaxa u saaran in ay ku daraan miiqyo dun ka kooban oo carab dheer leh oo ay guntin u tahay maro midab buluuga leh ) waa halka ay ka timi marka jaamacadaha la qalin jabinaayo in koofiyada qalin jabinta carab dheer oo ay biin gareyso mara yar oo midab buluuga leh yeelato; markale tani waa sababta calanka Israel iyo dhamaan wadamada dunida hodanka ah calamadooda ay ugu jiraan qayb midab buluug ah; sababta guudna ay tahay in midabka buluuga ah yahay ( astaanta jiritaanka, xukunka, tallada, boqornimada iyo xaqiiqda) isla mar ahaantaan waa sababta waxkasta oo waxsoosaarkooda ku asal leh ay ugu muunadeeyaan ugu yaraan meel uun ay ka soo galiyaan midabka buluuga ah; sidaa darteed waa muhiim iyo mahuraan in uu qayb ka noqdo midabka noocaas ah calanka ummada reer Somaliland.
5. ugu dambeyn abwaan gaariye ayaa gabay ka mid ah gabayadiisii ku sheegay in ictiraafkii inaga jiro xidigta la yidhaa ( dagaara ) oo ay tahay in laga doono xidigtaas, si aynu xidigtaa dagaara u aragno waa in xukuumadu cadeyso xidigtan madow ee calanka badhtanka u yuurarta, wey wacnaan lahayd hadii 4 ama 5 xidigood oo cad-cad lagu xoojiyo!!.
Waa suuragal in aad isweydiiso haduu buluug waxtarayo somaliyaba waa taa burburtay!! Calanka somaliya sidiisa ayuu u yahay habaar , habaarkiina waakaa Somalia ku dhacay!! Waayo midabkii cirka oo u taagan astaanta awooda ayey qaateen oo aan badhax la hayn been weyna wey ku dareen oo hal xidig ah ayey ku sharaxeen ; sirta faham oo u fiirso , midowga yurub , Britain iyo Australia calankoodu waa buluug balse dhawr xidigood iyo badhax ayey ku dareen ; hadaaney sidaa yeelin astaanta awooda midabka buluuga ayey u burburi lahaa yeen.
Gunadka qormadeydan waa codsi cod sare ah :
Madaxweyne waxa aan cod dheer kaag codsanayaa in aad cafis madaxtooyo u fidiso labada wariye ee ka hawl-gala Gobolka Awdal-Borama; oo lagu xukumay 2 sano oo xadhig ah xukuumadana u xidhan illaa hada waxa ay xidhnaayeen ku dhawaad 50 maalmood , wariyayaasha waxa la kala yidhaa: axmed diiriye ciiltire iyo maxamed dabshid.
Madaxweyne wariyayaashani shaqadooda waxa ku dhisnaa nolosha qoysas yar iyo weyn, mid arday ah iyo bilaa camal ah intaba leh; waxa aan rajaynayaa in xoriyadooda xukuumadu u soo celiso, dambiga loo haystana maadaama oo ay tahay markii u horeysay in loo khafiifiyo oo la saamaxo isla mar ahaantaana lagu war-galiyo ( waxa reeban iyo waxa ay raacayaan ee shaqdooda khuseeya) ; waxa aan ku niyad samahay in ay yihiin dhalinyaro u hagaasamaysa tilmaamaha iyo amarada dawlada.